တရုတ် Diode လေဆာ HS-811 ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | Apolo
ဥရောပ 93/42 / EEC MEDICAL Standard diode laser, TUV ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအီးအတည်ပြုခဲ့သည့်စနစ်။ ဒါဟာလူနာအမျိုးမျိုးတို့ကိုအများဆုံးထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံရေးနှင့်အတူယခုနှစ် phototype, ဆံပင်အမျိုးအစားသို့မဟုတ်အချိန်ကာလကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲကုသနိုင်တူညီယူနစ်သုံးခုကွဲပြားခြားနားသောလှိုင်းအလျားပေါင်းစပ်။
အဆိုပါလေဆာ handpiece ခေါင်းလူနာဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကုသမှုစဉ်အတွင်းနာကျင်မှု minimize လုပ်ကြောင်းနီလာအစွန်အဖျားနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည်။ ဒါကြောင့်ကုသမှု၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအာမခံမြင့်သောအာဏာနှင့်ကြီးမားသောအစက်အပြောက်အရွယ်အစားနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြု, handpiece ၏အစွန်အဖျားမှာ -4 ℃4℃တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်သေချာ။
နေရာအသီးသီးတွင် SIZE & POWER
SMART pre-set ကုသမှု Protocol
သငျသညျအားဖြင့်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကုသမှု clients များအများဆုံးလုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, အရေပြား, အရောင်နှင့်ဆံပင်အမျိုးအစားနှင့်ဆံပင်အထူများအတွက်တိကျစွာပရော်ဖက်ရှင်နယ် MODE အတွက် setting များကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါထိုးထွင်းသိမြင်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကိုသုံးပြီး, သင်လိုအပ်သော mode ကိုနှင့်အစီအစဉ်များရွေးနိုင်သည်။ အဆိုပါ device ကိုအသုံးပြုကွဲပြားခြားနားသော handpiece အမျိုးအစားများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ဖို့စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုစက်ဝိုင်း adapts, Pre-set ကိုအကြံပြုကုသမှု protocols များပေးခြင်း။
ယခင်: diode လေဆာ HS-810
နောက်တစ်ခု: diode လေဆာ HS-812
လေဆာ output ကို
56 * 38 * 110cm (L ကို * W * H ကို)
755nm: ဒဏ်ငွေ / ဆံပင်ရွှေရောင်ဆံပင်နှင့်အတူအဖြူရောင်အသားအရေ (phototypes ငါ-III ကို) အတွက်အကြံပြုခဲ့သည်။
: 810nm Golden standard for depilation, recommended for treating all skin phototypes, particularly patients withagreat density of hair.
800w Diode လေဆာ
808 Diode လေဆာ
diode 808 လေဆာ
diode လေဆာ 208
diode လေဆာ Epilator
hot Diode လေဆာ
Ipl Diode လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားရေး
diode လေဆာ HS-810
diode လေဆာ HS-817
diode လေဆာ HS-819
diode လေဆာ HS-818
diode လေဆာ HS-812
diode လေဆာ HS-816
Copyright © Shanghai Apolo Medical Technology Co.,Ltd. 2010-2019. All Rights Reserved. သိကောင်းစရာများ - Hot ထုတ်ကုန်များ - မြေပုံအညွှန်း - amp မိုဘိုင်း
808 Diode လေဆာ , Shr Ipl Yag လေဆာ , မေး Switch , Diode လေဆာ 808nm , diode လေဆာ Epilator, Ipl + Shr + Opt +Nd Yag Laser,